“ချစ် သော ကေ”- အ ပိုင်း (၇) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “ချစ် သော ကေ”- အ ပိုင်း (၇)
“ချစ် သော ကေ”- အ ပိုင်း (၇)
Posted by aye.kk on Jul 21, 2012 in My Dear Diary |9comments
အ ခု တော့ ကေ့ ဓါတ် ပုံ ကို ပဲ ၊ အိပ် ကဒ် ထဲ ဆောင် ထား ပြီး
ပြီး နေ ပါ့ မယ်…။ကေ….အ ပြော မ ကြီး နဲ့ ဦး နော် ။
က မ္ဘာ လ ဆန်း တ ရက် နေ့ ဆို လို့ ပါ ။
ကိုယ် က စ နောက် ပြီး ၊ စ ကား အ ဖြစ် သုံး တာ ဆို ပေ မယ့် ။
ကေ က အ တည် ပြော တာ ဆို ရင် တော့….။
ဆို ပြီး မှ…..။
အစ် ကို သု ခ က ဆက် မ ပြော တော့ ပဲ ရပ် သွား ပါ သည် ။
ဆက် ပြော လေ…။ စိတ် ဆိုး မယ့် စ ကား မို့ မ ပြော တော့ ပါ ဘူး ။
အစ် ကို သု ခ ၊ တ အား လည် တယ် နော် ။
ပြော ပြီး နှစ် ယောက် သား ရယ် မော မိ ကြ ပါ သည် ။
နှစ် ယောက် သား ၊ စ ကား တ ပြော ပြော လမ်း လျှောက် နေ ယင်း မှ ပင်။
အစ် ကို သု ခ က လက် ထဲ တွင် ပတ် ထား သော စီ ကို နာ ရီ အား ၊ ရှပ် အ င်္ကျီလက် ရှည် အား နဲ နဲ ခေါက် တင် လျှက် က ၊ ပင့် တင် ကြည့် ယင်း….။
စ ကား ပြော ကောင်း ကောင်း နဲ့ လျောက် လာ လိုက် တာ ။ (၇) နာ ရီ တောင် ခွဲ နေ ပြီ ရော ။
အင်း….။ ဒါ ဆို လည်း …….ပြန် ကြ ရ အောင် လေ ဟု ကေ မှ ပြော ပြီး ။
နှစ် ယောက် သား လာ ရာ လမ်း အ တိုင်း ၊ လှည့် ပြန် လာ ခဲ့ ကြ ပါ သည် ။
အိမ် ရောက် တော့ မ နက် ဖန် ပြန် ရ မည့် အ ရေး တွက်…
ကေ တ ယောက် သိမ်း စ ရာ ရှိ သည် များ ကို သိမ်း ဆည်း နေ မိ ပါ သည် ။
ပြီး တော့ မှ သာ ၊ ခြေ လက် ဆေး ကြော သန့် စင် ၍ အ ဒေါ် ပြင် ဆင် ထား ပေး သော အိပ် ရာ ကု တင် ပေါ် တွင် လှဲ ယင်း ၊ မ နက် ဖြန် မ ပြန် ခင် ။ လက် မ ခံ နိုင် ကြောင်း အား ကိ စ္စ အား ၊ ပြော မည့် အ ရေး တွေး ပြီး ရင် လေး နေ မိ ပါ သည် ။ တော် တော် နှင့် အိပ် မ ပျော် နိုင် ခဲ့ ။
စဉ်း စား နေ ယင်း ဖြင့် ၊ လင်း ကြက် တွန် သံ ကြား မှ ပင်
မှေး က နဲ အိပ် ပျော် သွား ပါ သည် ။
မိုး လင်း အား ကြီး တော့ မှ ကေ နိုး လာ ခဲ့ ပါ သည် ။
အ ဒေါ် က တော့ အ ရှေ့ စား ပွဲ ပေါ် တွင် ၊ ကော် ဖီ နှင့် မုန့် များ ၊ ထ မင်း ကြော် အား စား ရန် ၊ အ ရံ သင့် လာ ချ ထား ပေး ပြီး ၊ အ မြန် ရ ထား လက် မှတ် အား လက် ထဲ သို့ လာ ပေး သည့် အ ချိန် တွင်….
အ ဒေါ် ကို သ္မီး ပြော ချင် စ ရာ ရှိ လို့ပါ..။ ပြော စ ရာ ရှိ တာ စား ပြီး မှ ပြော လေ..။ ကော် ဖီ နဲ့ ထ မင်း ကြော် တွေ အေး ကုန် လိမ့် မယ် ။
အ မြန် ရ ထား က (၉း၀၀)နာ ရီ စီး ရ မှာ ၊ သု ခ က ဘူ တာ ရုံ လိုက် ပို့ ပေး လိမ့် မယ် ။ သု ခ လည်း မ နက် ဖန် ပြန် တော့ မှာ လေ ။
နင် တို့ နှစ် ယောက် လုံး ပြန် ရင် ငါ တော့ ပျင်း ကျန် နေ ရစ် တော့ မှာ ။
ဟု ပြော ဆို ခါ …..။
အစ် ကို သု ခ ကို ပါ ခေါ် လိုက် ပြီး ၊ တစ် ပါ တည်း ၀င် စား ခိုင်း ပါ သည် ။
အ ဒေါ် က ကော် ဖီ နှင့် မုန့် များ အား ၊ မ ကုန် ကုန် သည် အ ထိ စား ခိုင်း ပြီး ၊ ဘူ တာ များ ရပ် သည့် အ ချိန် ၊ မီး ရ ထား လမ်း ဘေး မှ ရောင်း ချ သော မုန့် ပဲ သွား ရေ စာ များ ၀ယ် မ စား ရန် ၊ ယင် နား စာ များ စား မိ မှာ စိုး သ ဖြင့် စိတ် ပူ ပြီး မှာ နေ ရှာ ပါ သည် ။
နှစ် ယောက် သား စား ပြီး သည့် အ ချိန် တွင် ၊ အစ် ကို သု ခ မှ ၊ အ လိုက် တ သိ နှင့် ပင် ကေ နှင့် အ ဒေါ် အ နား က နေ ထွက် သွား ပေး ခဲ့ ပါ သည် ။
ဟို နေ့ က အ ဒေါ် အ င်္ကျီအစ် ကို သု ခ ယူ ပေး တဲ့ ချိန် ၊ ဘီ ဒို အောက် မှာ သ္မီး ဓါတ် ပုံ တစ် ပုံ ပြုတ် ကျ နေ တာ တွေ့ လိုက် လို့ ပါ ။
အဲ ဒီ ဓါတ် ပုံ က ၊ ပြည် ထောင် စု အ လံ ကိုင် ရ တဲ့ အ ထဲ ပါ တုံး က ၊ အ လှ ရိုက် ခံ ထား တဲ့ တစ် ပုံ ဖြစ် နေ လို့ ပါ ။
အ လှ ဓါတ် ပုံ တွေ အ များ ကြီး ပဲ အ ရိုက် ခံ ပေး ခဲ့ ရ တာ ၊ ဘာ အ ဓိ ပါယ် မှန်း နား မ လည် ခဲ့ ဘူး ။ ဓါတ် ပုံ က အဲ ဒီ အ ထဲ က တစ် ပုံ ဖြစ် နေ တယ် ။
ထူး ဆန်း နေ တာ က အ ဒေါ် ဆီ ရောက် နေ တာ တွေ့ ရ လို့ ပါ ။
အ ရင် တစ် ခါ ၊ အ ဖြစ် ကို…..သ္မီး ပြော ပြ ပါ့ မယ် နော် အ ဒေါ် ။
သ္မီး က ဒီ လောက် အ သက် ငယ် သေး တာ ။ အ ဖေ တို့ ဆီ က နေ…
အိမ် ထောင် ရေး ကိ စ္စ ၊ စ ကား ကြား ရ တာ ရှက် ပြီး သေ ချင် စိတ် ပေါက် မိ ခဲ့ ပါ တယ် ။ အ ဖေ တို့ က အဲ ဒီ ကိ စ္စ တွေ ပြော ဆို နေ တာ ။
သ္မီး နား ထဲ မှာ တော့သံ ရည် ပူ နဲ့ လောင်း ချ လိုက် သ လို ပါ ဘဲ ။မ ခံ စား နိုင် လွန်း လို့ ပါ ။
အဲ ဒီ နေ့က နား နှစ် ဖက် ကို ၊ လက် နှစ် ဖက် နဲ့ အ သေ ပိတ် ပြီး ငို ခဲ့ ရ တယ် တစ် နေ ကုန် ပါ ဘဲ ။ နား တွေ လည်း ထူ ပူ ပြီး နီ ရဲ ပြီး နာ ကျင် နေ ခဲ့ တာ ။မ ခံ စား နိုင် လို့ တွေး တွေး ပြီး ၊ စိတ် ထဲ မှာ ရှက် စိတ် နဲ့ သိမ် ငယ် နေ မိ တယ် ။ အိမ် က နေ ကျောင်း သွား တဲ့ အ ချိန် လွယ် အိပ် လွယ် ပြီး
ထွက် လာ ခဲ့ တာ ၊ ဘု ရား ၀ိုင်း နား ရောက် တော့ ၊ တောင် ထန်း တွေ တင် လာ တဲ့ လော် လီ ကား ရှေ့ က နေ ၊ မ ထင် မှတ် ပဲ သွား ပြေး ရပ် လိုက် တော့ ၊ ဒ ရိုင် ဘာ က ရုတ် ချည်း ဘ ရိတ် အုပ် ပြီး ၊ ကား စ တီ ယာ ရင် ကို လမ်း ဘေး ထိုး ပြီး ကွေ့ ချ လိုက် တော့ ၊ ကား ဘီး နဲ့ က တ္တ ရာ ပွတ် တိုက် ဆွဲ လိုက် တဲ့
အ သံ ။ ကျွီ က နဲ ဆို ပြီး ၊ အော် မြည် တဲ့ အ သံ က ။
အ ရမ်း ကို ကျယ် လောင် သွား တယ် ။
ဘု ရား ၀ိုင်း ကာ ရံ ထား တဲ့ အုတ် နံ ရံ ကို အ ရှိန် ကြောင့် ၀င် ဆောင့် တိုက် မိ ပြီး ကား လည်း မှောက် လု မှောက် ခင် နဲ့ ထိုး ရပ် သွား တယ် ။
သ္မီး မျက် စေ့ ထဲ မြင် ပြီး ၊ ထိတ် လန့် သွား လို့ ငယ် သံ ပါ အောင် အော် မိ သွား တယ်။ သ္မီး …အဲ ဒီ နေ ရာ မှာ တင် မေ့ လဲ သွား ခဲ့ တယ်။
သေ ဘေး က လက် မတင် က လေး လွတ် သွား ခဲ့ တာ ။
ကား ဒ ရိုင် ဘာ က သူ့ အ သက် မ ငဲ့ ပဲ သ္မီး ကို ကယ် ခဲ့ တယ်။
ကား ဒ ရိုင် ဘာ က သ္မီး ကို မြင် တွေ့ တိုင်း ၊အဲ လို မ လုပ် ဖို့ အ မြဲ ပြော တယ် ။
ကိုယ့် ကို ကိုယ် သတ် သေ တယ် ဆို တာ က ၊ အ ဖန် ငါး ရာ ၊ ငါး က မ္ဘာ မျှ မ က ၀ဋ် ကြွေး ပြန် ဆပ် ရ တယ် ။ကြောက် စ ရာ အ ရမ်း ကောင်း လွန်း တယ် ဆို ပြီး ပြော ပြ တယ် ။ ဒီ စေ့ စပ် ထား မယ် ဆို တဲ့ ကိ စ္စ တွေ က ၊ သ္မီး အ တွက် က တော့ နား ရှက် စ ရာ အ ကောင်း ဆုံး ဖြစ် နေ တယ် ။
သ္မီး က ယော က်ျား လေး ဖြစ် ချင် လွန်း လို့ ဘယ် သူ မှ မ သိ အောင်
တ ယောက် ထဲ ကြိတ် ပြီး စိတ် ထဲ အ ရုး ထ နေ တဲ့ သူ ပါ ။
ဒီ လို အ ကြောင်း တွေ ကို…..
သ္မီး အ နေ နဲ့ က ကြား လည်း မ ကြား ချင် ဘူး ၊ စိတ် က လည်း မ ခံ စား နိုင် ဘူး ။ ခံ နိုင် ရည် အင် အား လည်း မ ရှိ ဘူး ။
စိတ် က ကိုယ့်ဘာ သာ ယော က်ျား လေး ဘဲ ဖြစ် ချင် နေ မိ တာ ။
အ မေ နဲ့အ ဖေ က ငယ် ငယ် တုံး က တော့ ဘို ကေ နဲ့ပဲ ထား လာ ပြီး မှ ၊ အ ခု ကျ မှ မိန်း မ ပုံ စံ ပြောင်း ခိုင်း တယ် ။ မ လွန် ဆန် ရဲ ပေ မယ့် သ္မီး စိတ် ထဲ မှာ က ၊ င ရဲ ကျ နေ သ လို ပါ ဘဲ ။ သ္မီး ဒီ ကိ စ္စ ကို မ ခံ စား နိုင် ဘူး ။
ကိုယ့် ကို ကိုယ် သတ် သေ ချင် တဲ့ စိတ် ပေါက် မိ တယ်။
သ္မီး ရင် ထဲ က ခံ စား နေ ရ တာ ကို ၊ အ မှန် ပြော ပြ နေ တာ ပါ ။
သ္မီး ကို အ တင်း အ ကြပ် မ လုပ် မိ စေ ဖို့ သ္မီး တောင်း ဆို ပါ တယ် ။
အ ဖေ တို့ကြောင့် ၊ သ္မီး အ ရမ်း ချစ် တဲ့ သူ ငယ် ချင်း နဲ့ လည်း ကွဲ ရ ပြီး ပြီ ။
စိတ် လေ ပြီး စာ မ ကျက် နိုင် တော့ …စာ မေး ပွဲ က ကျ တယ် ။
စာ မေး ပွဲ ကျ တော့ ၊ အ ဖေ တို့ က ၊ပု သိမ် မှာ ကျောင်း ပြောင်း ပြီး ထား တယ် ။
နေ တဲ့ ကျောင်း မှာ…
က ချင် တိုင်း ရင်း သူ အ စစ် မ ရှိ တော့ ၊ သ္မီး ကို က ချင် နဲ့ တူ တယ် ဆို ပြီး …
ဆ ရာ မ နဲ့ အ တန်း က ကျောင်း သား ခေါင်း ဆောင် က ရွေး တယ် ။
ပြည် ထောင် စု အ လံ ကို ကြို ဆို ရ တဲ့ အ ဖွဲ မှာ ၊ က ချင် တိုင်း ရင်း သူ အ ဖြစ် အ ရွေး ခံ ရ လို့ သ္မီး ငြင်း ခဲ့ တယ် ။
ငြင်း မ ရ တော့ ၊ က ချင် တိုင်း ရင်း သူ ၀င် လုပ် ပေး ခဲ့ ရ တယ်။
ပု သိမ် မှာ ပြည် ထောင် စု အ လံ ကြို ရ တဲ့ နေ့ က ၊ နေ့ ဝက် လောက် ကျိုး အောင် ဓါတ် ပုံ အ ရိုက် ခံ ပေး ခဲ့ ရ တယ် ။
အဲ လို မျိုး ဓါတ် ပုံ အ ရိုက် မ ခံ ချင် ပါ ဘူး ဆို မှ ၊ ဓါတ် ပုံ အ ရိုက် ခံ ပေး ခဲ့ ရ တယ်။ ဓါတ် ပုံ ဆ ရာ က ပြိုင် ပွဲ ၀င် ချင် လို့ ရိုက် တယ် ။
အ ဖေ က တော့ ….
ဓါတ် ပုံ နဲ့ ပြ ပြီး ၊ သ္မီး ဘ၀ ကို ကောင်း စား ဖို့ တွက် ဓါတ် ပုံ နဲ့ လဲ လှယ် ချင် ပြန် တယ် ။ သ္မီး ရဲ့ အ တ္တ စိတ် အ တွင်း သ ဏ္ဌန် ကို တော့ ၊ အ ဖေ နား မ လည် ခဲ့ ဘူး။ တစ် ချိန် လုံး ရိုး ရာ အ ရ ပဲ လုပ် နေ တယ် ။
မိန်း က လေး မှန် ရင် စေ့ စပ် ထား ရ မဲ့ ကိစ္စ တွေ ပဲ ပြော ပြော ပြ နေ တယ် ။
အ ဖေ တို့ ရိုး ရာ အ ရ ၊ မိန်း က လေး ဖြစ် ရ တာ…
ဖြစ် ကို မ ဖြစ် ချင် ဘူး ။
ဒါ ကြောင့် လည်း နေ့တိုင်း ၊ ဘု ရား ရှိ ခိုး ပြီး တာ နဲ့ ယော က်ျား လေး ဖြစ် ရ ပါ လို ၏
လို့ အ ကျယ် ကြီး မ ကြား ကြား အောင် ၊ အော် အော် ပြီး ဆု တောင်း နေ မိ တာ။
တ အိမ် လုံး က သ္မီး ကို အ မြင် ၀ိုင်း ကပ် ကြ တယ် ။
မိန်း က လေး မှန် ရင် ငယ် ငယ် ထဲ က စေ့ စပ် တဲ့ ကိ စ္စ ၊ အ ဖေ တို့ ပြော ပြော နေ တဲ့ အဲ ဒီ ရိုး ရာ အ ရ ….
ဆို တာ ကြီး ကို က ၊ နား ထဲ မှာ ကြား ကြား နေ ရ တာ ကို က ၊ မ ခံ စား နိုင် ပါ ဘူး ။ဘယ် လို မှ လည်း ခံ စား လို့ ကို မ ရ တာ ပါ အ ဒေါ် ရယ် ။
သ္မီး ကို နား လည် ပေး နိုင် ဘို့ တောင်း ဆို ပါ တယ် ။
သ္မီး ကို ကူ ညီ ပါ နော် ။ အ ဒေါ် မ ကူ ညီ ရင် တော့….
နောက် တ ကြိမ် ဆို တာ မျိုး လည်း သ္မီး ထပ် မ ဖြစ် ချင် ပါ ဘူး ။
သ္မီး စိတ် က လက် သင့် ခံ ဖို့ အ တွက် ဘယ် လို မှ မ ရ နိုင် သေး လို့ ပါ။
ပြော ပြ သည့် စ ကား တို့ အား….။ အ ဒေါ် မှ နား ထောင် ပေး ပြီး ။
အ ဒေါ် တို့ ရိုး ရာ က အေ ။ မိန်း က လေး မွေး လာ ရင် အ ရမ်း ကို နှိမ် ထား တယ် ။ နှိမ် ထား တာ ကို က ၊ ကောင်း ကို မ ကောင်း ဘူး ။
အ ဒေါ် လည်း မိန်း မ ဆို တော့ ။
ခံ စား ခဲ့ ရ လို့သ ဘော ပေါက် ပါ တယ် ။ သ္မီး ကို အ တင်း အ ကြပ် မ လုပ် ပါ ဘူး ။အ ဒေါ် က တိ ပေး ပါ တယ် ။ ဒါ ပေ မယ့် သ္မီး ရေ..။ မိန်း က လေး ဆို တာ က မိန်း က လေး ပါ ဘဲ ။
သ ဘာ ၀ ကို တော့ လွန် ဆန် လို့တော့ ဘယ် ရ နိုင် မ လည်း ။
သ္မီး အ နေ နဲ့ က အ ချိန် တန် လာ တဲ့ အ ခါ သ ဘော ပေါက် လာ မှာ ပါ ။
သ ဘာ ၀ ကို မ ဆန့် ကျင် နဲ့ ။ သ္မီး လက် ခံ နိုင် အောင် ကျိုး စား ရ မယ် ။
မြင် တတ် ရ မယ် လေ..။ မ မြင် တတ် ရင် အ မှား မ ဆုံး ဖြစ် နေ တော့ မှာ ပေါ့ ။
စ ကား ပြော နေ တာ ကြာ လှ ပေါ့ ။ အ ချိန် တွေ လည်း လွန် ကုန် အုံး မယ် ။
သု ခ ရေ…..
မင်း ညီ မ ကို ဘူ တာ ရုံ လိုက် ပို့ ဖို့ ပြင် ထား ပါ ဦး ကွယ် ။
သ္မီး လည်း ဘု ရား ကို ကန် တော့ လိုက် ဦး ။ ခ ရီး သွား တဲ့ ခါ ၊ လာ တဲ့ ခါ ….
ရ တ နာ သုံး ပါး ကို မ မေ့ နဲ့ ။
အိမ် ပြန် ရောက် ရင် လည်း ဒီ ကိ စ္စ တွေ ကို စိတ် ထဲ ထည့် ပြီး မ စဉ်း စား နဲ့ ။ အ ဒေါ် လည်း ၊အ ဖေ့ ကို သ ဘော နား ၀င် အောင် ပြော ပြ ပေး မယ် ဟုတ် လား….။ စိတ် အေး အေး ထား နော် ဟု ဆို ခါ ၊ အ ဒေါ် က ဖြောင်း ဖျ ပြီး နား ၀င် အောင် ပြော ပြ ပါ သည် ။ ဘု ရား ကန် တော့ ၀တ် ပြု ပြီး သည် နှင့် တ ဆက် တည်း ပင်…။ အ ဒေါ် အား ကေ မှ ကန် တော့ လိုက် ပါ သည် ။
အ ဒေါ် က….၊ ငါ့ တူ မ လေး …။
သွား လေ ရာ လာ လေ ရာ….
လို ရာ လမ်း ခ ရီး တ လျှောက်…
ဖြောင့် ဖြူး သာ ယာ ပါ စေ ဟု နှုတ် မှ ရွတ် ဆို လျှက် ဆု ပေး ပါ သည် ။
အ ဒေါ် အား နှုတ် ဆက် ပြီး…..သည် နှင့်
ကေ မှ ဟမ်း ဘက် အိတ် ယူ ကာ ၊ အစ် ကို သု ခ နှင့် နှစ် ယောက် သား
အောက် ထပ် သို့ ဆင်း လာ စဉ် ၊ အစ် ကို သု ခ မှ ကေ့ လက် ထဲ က ဟမ်း ဘက် အိတ် အား ဆွဲ ယူ ၍ သယ် ကူ ပေး ပါ သည် ။
ကေ က င ရဲ ကြီး မှာ စိုး ကြောက် မိ သည် ဟု ပြော မိ လျှင်….
အစ် ကို သု ခ က ဒါ တွေ ကို ၊ ကိုယ် အ ယူ မ ရှိ ဘူး ။
စေ တ နာ ဖြင့် ဆောင် ရွက် ပေး ခြင်း ဖြစ် ၍ ၊ င ရဲ မ ကြီး ပါ ဘူး ဟု ပြော ပြ ပါ တော့ သည် ။။
အန်တီအေး တို့ လူမျိုး ရှေးထုံးစံအရ ခပ်ငယ်ငယ်ထဲက မြန်းပြီး အိမ်ထောင်ရက်သားချပေးကြတယ်နော်။
ခုထိ အဲ့ဒီ ထုံးစံ ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရည်းစား ထားခဲ့သော်ငြား အိမ်က မြန်းတဲ့သူနဲ့ ပဲ ယူကြတာ တွေ့မိတယ် ။ အများစု။
ဒီပိုစ့်ကြမှပဲ ဒေါ်လေးကေရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည် သဘောပေါက်မိတယ်
မိန်းမတွေ လင်ယူတဲ့နေရာမှာ ပိုက်ဆံချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ ရှေးရိုးစွဲမိဘများအား လုံးဝ ကန့်ကွက် ဆန့်ကျင်ပါအိ
အဲဒီ မျိုးဆက် တွေတုန်းက မိန်းကလေး ဆို ငယ်ငယ် နဲ့ အိမ်ရှင်မ အဖြစ် အတင်းသွတ်သွင်း ကြတာ ဖက်ရှင်ပါဘဲ။
ဒီတော့ နောက် မျိုးဆက် ကျတော့ ကိုယ်ခံစားရသလို မဖြစ်အောင် သမီး တွေ ကို သိပ်မချုပ်ချယ် ကြတော့ သလိုထင်ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်က မိန်းကလေး တွေ ဟာ ပါကစ္စတန်တို့၊ အာဖကနစ်စတန် တို့ က မိန်းကလေး တွေထက်စာရင် အများကြီး အခွင့်အရေး ရခဲ့တာ အင်မတန် ကျေးဇူးတင်စရာပါ။
ဒါနဲ့ အစ်ကို သုခ က ကေ့ နဲ့ ရထားပေါ် ကို အတင်းလိုက်မလာဘူးလား။
နောက်တစ်ခန်း မြန်မြန်လေးနော် အစ်မအေး။ :-)
အဲ ဇာတ်လမ်းထဲ စီးမျောသွားပြီး မှားခေါ်မိပြီ။
မအေးရဲ့ စိတ်ကို ခုမှ နားလည်သလိုလို ရှိလာတယ်။
အိမ်ကတူမလေးကလည်း မွေးကတည်းက သူ့ကိုယ်သူ ယောင်္ကျားလေးဆိုပြီး ……..
၀တ်တာ၊ စားတာ၊ နေတာ၊ ထိုင်တာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ။
တခုကောင်းတာက အလုပ်ဆို မိန်းကလေးတွေလို နွဲ့မနေပဲ ဘာဖြစ်ဖြစ် လာထား ပဲ။ [:)]
ကြောင်ကြီး ခြောက်ချင်ချင်ဖြစ်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ အန်တီမမရေ။ တူမလေးက ကျားကျားလျားလျားဆိုတော့ အားကိုးပါရစေ။
၀န်ခံပြီလား အောင်ပုနဲ့ ဓာတ်တူနာမ်တူတွေဆိုတာကို
အိမ်သားတွေအကုန်လုံး သူ့လက်ရာနဲ့ လွတ်တဲ့သူ မရှိဘူး။
အဖေတို့ ရဲ့ အယူဓလေ့အရ…
လျောင်ကီးရဲ့ သ္မီးလေးနဲ့ ရပါစေ။။(ခင်လို့ စပါ၏)
ပြည်ထောင်စုအလံကိုင်တုန်းက ဆိုတော့ အတော့်ကိုချောမှာနော်။
အော်မှားလို့ ခုလဲ ချောပါ၏။ဟီးးးးးးးးနောက်တာပါဗျ။
ပုသိမ်ဝင်းချစ်ကအန်တီကိုကချင်တိုင်းရင်းသူနဲ့ အင်မတန်လိုက်ဖက်လို့ ဆိုပြီး
ပထမဆုရဖို့ အတွက်၊ဓါတ်ပုံဆရာကရှူခင်းရှူဒေါင့်နည်းပေါင်းစုံနဲ့ နေပူပူ၊
ကျွမ်းကျင်တဲ့သူရဲ့ အတွေးအခေါ်လက်ရာလှလှရိုက်ချက်ကြောင့်ဆုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ 
အန်တီထင်မြင်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ ကမနက်ခင်းကြိုဆိုအပြီးမှာဓါတ်ပုံဆရာကပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ အတွက်
(ဓါတ်ပုံဆရာအတွက်ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံရတာအဲဒီနေ့ ကရေသောက်မုန့် 
အန်တီချောလို့ လှလို့ တော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ငယ်ရွယ်နုပျိုမြစ်တဲ့အရွယ်ဆိုတော့
တာနဲ့ လည်းအတော်လေးသက်ဆိုင်မယ်လို့ ထင်မြင်ပါတယ်။